Skyblue's photos : Camera ကောင်း ပိုင်ရှင် မှသည် Photographer အဖြစ်သို့
အချို့သော သူတို့သည် ကောင်းမွန်သော Digital Camera တလုံးကို စတင်ပိုင်ဆိုင်ပြီးသည်နှင့် Professional တစ်ဦးကဲ့သို့ ဓါတ်ပုံများ ရိုက်နိုင်ပြီဟု ခံစားနားလည်နေကြလေသည်။ ထို့အပြင် သူတို့သည် သေချာပေါက် ယခင်က ဓါတ်ပုံသမားများ ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပုံများကို ရိုက်နိုင်ပြီဟု အဘယ့်ကြောင့် မှတ်ထင်ရသနည်းဆိုသော် ဒီကနေ့ နည်းပညာမြင့်မားသော Digital Camera တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ ဘယ်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ Photography ၏ နောက်တဆင့်သို့ တက်လှမ်းလာပြီ ဆိုသည်ကိုဖြင့် အသိအမှတ်ပြု ရပေမည်၊
သင်ကိုယ်တိုင်သော်၎င်း၊ အခြားသူတို့ထံမှ ဆက်စပ်၍သော်၎င်း အချို့သောသူတို့၏ အောက်ပါမှတ်ချက်တို့ကို အံ့သြ၀မ်းနည်းဖွယ် ကြားရနိုင်ပါသည်၊
“ခင်ဗျားမှာ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ Camera နဲ့ မှန်ဘီလူးကြီး ရှိတော့ ပုံကောင်းကောင်းတွေ ထွက်တာပေါ့”
“ မင်း ပုံကောင်းလိုချင်၇င် သူလို Camera နဲ့ Lens တွေ ရှိမှဖြစ်မယ်”
“ဒါလေးများကွာ ဒို့မှာ ဒီလို ကင်မရာမျိုးတွေ ရှိရင် လုပ်လို့ဖြစ်တာပဲ”
“တနေကုန် Camera, Computer တွေနဲ့ ရှုပ်နေပြီး တွက်လာတော့ တပုံထဲ” စသည် စသည် တို့ဖြစ်သည်။
Camera ဆိုသည်မှာ တီထွင်ထုတ်လုပ်သူတို့ ၏စက်ပစ္စည်း တစ်ခုသာဖြစ်သည်၊ လက်မှုပညာ ရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာရန် ဒီကရိယာလေးကို ဘယ်လို အသုံးချ ရမှာလဲ ဆိုသည်ကို သေချာနားလည် သဘောပေါက် ရန် လိုအပ်လှပေသည်။
သင်သည် Camera ကိုကောင်းစွာ အသုံးချတတ်ပြီ ဆိုရင်ဖြင့် သင့်အမြင်၊ ခံစားရမှု၊ သင်၏ဖန်တည်းမှု၊ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော တွေ့အကြုံများ တို့နှင့်ပေါင်းစပ်၍ သေသပ်ကောင်းမွန်လှပသော ပုံတွေရဲ့ ဖန်တည်းရှင် Photographer ကောင်းတစ်ယောက် မလွဲဧကံ ဖြစ်ရပေမည်။
အမြင်ဟုဆိုရာတွင် ဤအရာဝတ္ထု ရှုခင်း အဖြစ်အပျက် ကို မည်သို့ ရိုက်လျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်မည် ပို၍ အနာအစာကင်းမည် ဘယ်ကဲ့သို့ ဖန်တည်းနိုင်မည် ဆိုသည်ကို သင်သိနားလည်ထားရပေမည်၊ ထိုလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်စည်းရန် သင်သည် ပုံများများ ကြည့်ရှုခြင်း၊ မကြာခဏ အဖွဲ့တို့နှင့် ပုံရိုက်ထွက်ခြင်း တို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အခြားသူတို့၏ အမြင် နှင့် မိမိ၏ အမြင်ကို ယှဉ်တွဲ လေ့လာခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပေသည်။
ဓါတ်ပုံသည် ကဗျာစာပေ ကဲ့သို့မဟုတ်ပဲ သင်၏ မျက်မြင် မြင်ကွင်း ခံစားမှု၊ ဖန်တည်းမှု ရသ ကို ပုံကြည့်သူထံ တစ်ခုတည်းသော ပုံဖြင့် ပေးရသည်မှာ လွယ်ကူသည့် အရာတော့ မဟုတ်ပေ၊ လွမ်းဆွေးဖွယ်၊ တက်ကြွဖွယ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်၊ ရွှင်မြူးပျော်ဖွယ်၊ ပီတိဖြစ်ဖွယ် စသော ခံစားမှု ရသအစုံစုံတို့၏ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ရသ ဖေါ်ကြူးသော ပုံဖြစ်ရန် သင်ကိုယ်တိုင် ခံစားနားလည် ဖန်တည်း တတ်မှ သာလျှင် ဖြစ်ပေမည်၊
Art ဟူသည် ကျယ်ဝန်းလှပေသည်။ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ တေးဂီတ၊ ကဗျာစာပေ၊ ဓါတ်ပုံ စသော အမျိုးကွဲ အနုပညာ မြစ်ချောင်း တို့ပေါင်းဆုံ၍ ကျယ်ဝန်း၍ အဆုံးစမဲ့သော အနုပညာ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာ သို့စီးဆင်းဝင်ရောက် ဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ထို့ကြောင့် Art photography တို့ကိုဖန်တည်း ဖေါ်ဆောင်ရန် အသစ်အသစ်သော ထွက်ပေါ်နေသည့် နည်းပညာတို့ကို မပြတ်လေ့လာ အသုံးချ ရပေမည်၊ ထို့အတူ မတူမျိုးကွဲ ပုံအမျိုးမျိုးတို့ကို ရိုက်ယူနိုင်ရန်လည်း သင်စွမ်းဆောင် ရပေမည်၊သို့မှသာ Creation ဆိုသော ဖန်တည်းမှု ကိုပိုမို ပြောင်မြှောက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ ဖြတ်သန်းလာသော Cameraman လမ်းတလျှောက် တွေ့ကြုံ ရိုက်ကူးထားသော ပုံတို့ နှင့် အခြားသူတို့ ရိုက်ကူးထားသော ပုံတို့ ကို လေ့လာ သုံးသပ်ခြင်းသည် မည်သည့် အချိန်၊ မည်သည့် အလင်းရောင်၊ မည်သို့ လျှပ်တပျက်ရိုက်ခြင်း စသော အသိပညာနှင့် သင်ကိုယ်တိုင် တွေ့ရှိသော အတွေ့အကြုံတို့သည်လည်း အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အရာများပင်ဖြစ်ပေသည်။
ထိုသို့သော အကြောင်းတို့ကြောင့် Cameraman တစ်ယောက် အတွက် အခြေခံ အစဖြစ်သော သင်၏ Camera နှင့် အောက်ပါ အချက်သုံးချက်ကို ဦးစွာပထမ လေ့လာနားလည် အောင်ပြုရပေမည်၊
၁။ Learn to shoot in manual mode.
၂။ Learn to shoot in RAW
၃။ Learn how to useagood flash.
ဤအချက် သုံးရပ်ကို ကောင်းစွာနားလည် အသုံးချနိုင်လျှင် သင်သည် Camera ကောင်းပိုင်ဆိုင်သူ အဆင့်ထက် သာလွန်သော ဓါတ်ပုံဆရာ (Photographer) အဖြစ်ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ သင်သည် Manual Mode နဲ့ သို့ Shoot ရမည် ဆိုတာကို နားလည်ကျွမ်းကျင်ရပေမည်၊ Shooting in Manual Mode သည် တစ်ခုတည်းသော မှန်ကန်တဲ့ ဓါတ်ပုံသင်ကြားမှု လမ်းကြောင်းပင်ဖြစ်ပေသည်၊ တချို့သောသူတို့သည် သေသပ်ကောင်းမွန်လှတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို Photo web site တွင်တင်၍ ပြသထားကြသော်လည်း ယခုအချိန်ထိ Manual mode နဲ့ မည်သို့ရိုက်ရမည် ဆိုတာကို မသိကြကြောင်း တွေ့မြင်သိရှိရပေသည်။
သူတို့သည် Shutter Speed နှင့် fstop ဆိုသည်ကို မသိ ကြသကဲ့သိုို့ အဘယ်ကြောင့် ၎င်းတို့၏ Sport Photograph က မှုံဝါးနေရသည် ဆိုတာကို မသိကြပေ၊ ၎င်းတို့သိထားတာသည်မှာ Camera Mode ကိုတခုသော Automatic mode ထားထားလျှင် အခါအားလုံး နီးပါး ကောင်းမွန်တဲ့ ပုံတွေ ရရှိတာကို ပင်ဖြစ်လေသည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် သင်သည် … Depth of field ကို မည်သို့ထိမ်းမည်၊ လှုပ်ရှားနေသည့် ပုံရိပ်ကို မည်သို့ဖမ်းမည်၊ မလုံလောက်သော အားနည်းနေသော အလင်ရောင်အောက်တွင် ပုံကောင်းရရန် မည်သို့ရိုက်မည် စသည်တို့ကို သင်ကြားလေ့လာမည်ဆိုလျှင် fstop, shutter speed, film speed, amount of light တို့နှင့် Digital camera ၏ Sensor သို့ အလင်း သက်ရောက်ပုံတို့အား ကြေကြေ ညက်ညက် နားလည် အသုံးပြုတတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Film sensor မှ Digital sensor သို့ မည်သို့ပင် နည်းပညာများ ပြောင်းသော်လည်း ဓါတ်ပုံသည် အလင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသည် အလင်းရောင်၏ ဖေါ်ဆောင်မှုကြောင့် Digital ဓါတ်ပုံ ဖြစ်ပေါ်လာသည် ဆိုသည်မှာ ဟိုးယခင် ဖလင်ခေတ် နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ မှန်ကန်သောExposure ရွှေးချယ်မှသာ မှန်ကန်တဲ့ အလင်းပမာဏ သည် Sensor ကိုရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ပါတယ်၊ ထို့ကြောင့် အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော Exposure ပြောင်းပုံ ၄ မျိုး ကို ဖေါ်ပြထားပါသည်၊
၁။ Change the fstop (Aperture) on the lens.
၂။ Change the shutter speed.
၃။ Change the ISO (film speed)
၄။ Change the lighting.
အကယ်၍ သင်သည် Automatic mode နှင့် ရိုက်မည် ဆိုလျှင် သင့်၏ Camera သည် ပုံရိပ်၏ တနေရာ သို့ မဟုတ် နှစ်နေရာ ကို အကောင်းဆုံးရွှေး ယူပါလိမ့်မည် ထို့အပြင်တခါတရံ၌ အာလုံးကို ရွှေးသော်လည်း မှားယွင်းနေ တတ်ပေသည်။
အကယ်၍ Built in flash ကို အသုံးချခဲ့သော် Camera သည် အလယ်လောက် အကွာအဝေး၌ ရှိသောငြိမ်သက်နေသည့် အရာဝတ္ထုကို စူးရှသော Flash အလင်းကို ပွင့်စေခြင်း သို့မဟုတ် Shutter Speed ကို နှေးစေခြင်းတို့ကြောင့် ပုံရိပ်ကိုဝါးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် အလင်းများလွန်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Sport ပုံတွေ ရိုက်ယူသည့် အခါတွင် Manual Mode ၌ သင့်၏ Shutter Speed ကို အနည်းဆုံး 1/200 ofasecond မှာထားသင့်ပါသည် တကယ်လို့ ဘော်လုံးပွဲမျိုးကို ရိုက်မည်ဆိုရင် ISO ကို 1600 fstop ကို 2.8 သို့မဟုတ် 3.5 မှာထားပြီး ရိုက်ရပါမည်။ DSLR အများစုတွင် Fast Lens မပါတတ်ပေ၊ Fast Lens တို့သည် Small fstop number များကို ဖွင့်ပေးနိုင်ပြီး fstop 2.8 ဆိုလျှင် အတော်ကောင်းမွန်သည့် fast Lens ဖြစ်နေပေသည် Lens တခု၏ Smaller fstop သည် ပိုမိုကျယ်သော အလင်းဝင်ပေါက်ကို ဖွင့်နီုင်ပြီး Sensor သို့ အလင်းပမာဏ ပိုမိုသက်ရောက် စေလေသည်။
ဥပမာ fstop ကို ရေပိုက်ခေါင်းတစ်ခုလို့ သဘောထားရင် f22 fstop သည် အိမ်သုံးရေပိုက်ခေါင်းလေး ဖြစ်ပြီး f2.8 သည် မီးသတ်ပိုက်ခေါင်း ဖြစ်ပေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်မည်သည့် ပမာဏလောက်သော အလင်းကို Sensor စီကိုစီးသွား စေချင်သည် ဆိုသည် ကြောင့်ုဖြစ်သည် သင်သည် Night Sport ကိုရိုက်မည် ဆိုလျှင် သင်၏ fstop သည် မီးသတ်ခေါင်းခန့် ဖြစ်ရပေမည်။
ထို့ကြောင့် သင်ဟာ wide open fstop (aperture) မှ Close down aperture သို့လျော့ချရ ခြင်းဖြင့် Photo plane ပေါ်သို့ကျရောက်သော အလင်း ပမာဏကို လျော့ကျ စေမည်ဖြစ်သည်၊ fstop တစ်ခုစီသည် မူလတစ်ခု၏ အလင်းစုစည်းမှု ပျမ်းမျှ ထက်ဝက်ခန့် ရှိသည်။ (အသေးစိတ် ရှင်းလင်းထားချက်ကို Photographer Zay Yar Hlaing ၏ Post တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။)
သင်၏ exposure ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန် ဒုတိယနည်းလမ်း သည် အကယ်၍ အလင်းပမာဏကို ချိန်ညှိလိုသော် Shutter Speed ကိုပြောင်းလွဲ ပေးခြင်းပင်ဖြစ် သည်၊ Shutter speed ဆိုသည်မှာ Shutter ကိုမည်မျှလောက် အတိုင်းအတာ အချိန်ထိ ဖွင့်ထားမည် ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ Shutter speed 1/200 ၏ဆိုလိုချက်သည် တစက္ကန့် ရဲ့ 1/200 ပဲဖြစ်၍ 1/100 သည် တစက္ကန့် ၏ 1/100 ဖြစ်သည်၊ အကြောင့်လဲဆိုရင် 1/100 သည် 1/200 ၏ နှစ်ဆ ဖြစ်သည် ထို့ကြောင့် နှစ်ဆသော အလင်းကို Camera ထံသို့ ၀င်ရောက်စေသည်။
ဘယ်သို့ဆိုစေကာမူ သင်သည် လွန်စွာနှေးသော Shutter Speed ကို အသုံးပြုလျှင် မည်သို့သော ရလဒ်ကို ရရှိမည်ကို သိရှိရန်မှာလည်း အရေးကြီးသော အချက်တချက်ဖြစ်ပေသည်၊ အနည်းဆုံး 1/200 Shutter Speed ကိုသုံးမှသာ Action ပုံတွေကို ရရှိပေမည်၊ ၎င်း Shutter Speed ဖြစ်သော်လည်း သင်သည် Action ၏ မှုံဝါးသော ပုံအချို့ရနိုင်သေးသည်၊ သင်၏မြင်ကွင်းသို့ ရိုက်မည့် အရာဝတ္ဘု ရောက်ချိန်တွင် Camera လှုပ်ခါသွားခြင်း (Camera Shake) ကြောင့် ပင်ဖြစ်သည်။
Camera Shake သည် Camera ၏ shutter ပွင့်ချိန်တွင် လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရပြီး အောက်ပါ အချက်တို့ကြောင့်ဖြစ်လေသည်၊
The type of lens တို့ပင်ဖြစ်သည်။
ဟိုးယခင်နေ့ထဲက သတ်မှတ်ထားချက် တခုမှာ သင်၏ Shutter Speed ကို Length of the lens ထက်ပိုမိုနှေး စွာမသုံး ခြင်းပင်ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ 50mm Lens ကိုသုံးစဉ် 1/50 နှင့် 200mm Lens ကိုသုံးစဉ် 1/200 ထက်မလျော့ စေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ (ActionPhoto များကို Photographer Kar Kar ၏ F1 Album တွင် Setting များ ဖေါ်ပြထား၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။)
ဤမျှုဆိုရင် fstop နှင့်shutter speed တို့ကို သင့်၏ ကင်မရာတွင် မည်သို့ ချိန်ညှိရမည်ကို သိရှိပြီးဖြစ်၍ Film speed ခေါ် ISO ကို လေ့လာရပေမည်၊ အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့် ငယ်သော ISO 100 သည် သင့်ပုံ၏ အရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်၊ သို့သော် အမြဲတမ်း 100 ဖြင့် ရိုက်ယူ၇န် မဖြစ်နိုင်ချေ၊ နေသာသောနေ့များနှင့် Studio ခန်းများတွင် 100 ဖြင့်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အလင်းရောင်၏ ပြောင်းလွဲမှု ရှိလာသည်ျနှင့် အမျှ ISO ကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် fstop နှင့် Shutter Speed တို့ကို အသုံးပြုပြီး သင်လိုချင်သော ရလဒ်ကောင်းကို ရရှိပေမည်။
အိမ်တွင်း ရိုက်ကွက်များ ရိုက်ယူရာတွင် ISO ကို 400 သို့မဟုတ် ပို၍များသော ISO နှင့် ရိုက်သင့်ပေသည်၊ အကယ်၍ သင်သည် Flash ကိုသုံးခဲ့သော် ISO 100 အတွင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း နောက်ခံတို့သည် အမှောင်ကျနေ၍ ကြည့်ရှုသူအတွက်သင်၏ ပုံသည် ကျွမ်းကျင်မှုနည်း သည်ဟု မြင်နိုင်လေသည်။
ဤကဲ့သို့သော အခြေအနေကို ဖြေရှင်းနိုင်သော သော့ချက်မှာ External Flash ကိုအသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ Flash Head ကို လှဲ့ပြောင်းနိုင်၍ ဖြစ်သည်၊ ဤနည်းဖြင့် နံရန် သို့မဟုတ် မျက်နှာကျက်တို့မှ ရောင်ပြန်လင်းတန်းကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး နောက်ခံတို့ ကိုပါ ညီမျှသော အလင်းကျရောက်စေ၍ ပုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်၊ အခန်းတွင်းတွင် ISO 400 မြင့်သော ISO ကိုသုံးခြင်းဖြင့် လဲ ရရှိနိုင်လေသည်၊ သင့် အနေဖြင့် Flash အကူအညီမပါပဲ မြင့်သော ISO 800, 1600, 3200 တို့နှင့် ရိုက်ယူနိုင်ပေသည်၊ သိုသော် သင် ISO ကိုမြင့်တိုင်း သင့်ပုံတွင် Noise များပိုတက်လာ မည်ကို မမေ့သင့်ပေ။
နောက်ဆုံးနည်းလမ်းအနေနှင့် သင်၏ Exposure ကိုပြောင်းရန် အခန်းတွင်း အလင်းပမာဏ ပိုမိုရရှိ၇န် လိုက်ကာတို့ကိုဖွင့်ခြင်း၊ သင်ရိုက်လိုသော အရာဝတ္ထုကို ပြင်ပသို့ထုတ်ခြင်း၊ External Flash ကိုတပ်ဆင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ အချက် လေးချက်ဖြစ်သည့် Shutter Speed, fstop, ISO နှင့် Using Flash တို့သည် Camera တစ်လုံး၏ Exposure ကိုပြောင်းရန် နည်း လေးမျိုးပင်ဖြစ်လေသည်။
သင့်အနေဖြင့် Photographer တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် Camera ကို Manual Mode တွင် အသုံးချတတ်မှ သာဖြစ်သည် ဖေါ်ပြပြီးသော အချက်လေးချက်ကို အသုံးပြုနိုင်မှသာ သင်လိုချင်သော ပုံကို လိုချင်သည့် အတိုင်းရရှိနိုင်ပေသည်။ အသေးစိတ် ပုံများဖြင့် ရှင်းလင်းထားချက်ကို Photographer Zay Yar Hlaing ၏ အောက်ပါ Post များ တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Camera ကောင်းဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်သူမှ Photographer ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ၊
Posted by Skyblue (Htin Lin) at 12:54 AM